सिलवाल किर्ते काण्ड हंगामा : एसएसपी धानुकको मिलेमतोमा भूमिगत ! पढ्नुहोस् नालीबेली
अन्तर समझ, काठमाडौं, २३ पुस । महानगरीय प्रहरीपरिसर काठमाडौंले ललितपुर प्रहरीलाई पूर्वडीआईजी एवं एमालेका सांसद् नवराज सिलवाल तत्काल पक्राउ गरेर उपस्थित गराउनू भन्दै पत्र काटेपछि सिलवाल एकाएक भूमिगत भएका छन् ।
सो पत्र काटेपछि विभिन्न मिडियामा सिलवाल मलेसिया गएको भनिँदै समाचार आए पनि उनी एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भने नगएको प्रष्ट भएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग नगरेका सिलवाल कुन माध्यमबाट मलेसिया पुगे भन्नेबारे सम्बन्धित निकायबाट खोजी भए पनि सिलवाल भने भारतको विमानस्थल हुँदै गएको आशंका प्रहरीले गरेको छ ।
डीजाईजी सिलवालको समाचारले सुरक्षा निकायमात्र होइन राजनीति क्षेत्रमा समेत हंगामा मच्चिएको छ । उनी एकाएक किन भूमिगत भए ? सम्बन्धित निकायसँग कुनै रेकर्ड छैन् । नवनिर्वाचित सांसद एकाएक भुमिगत हुनु आफैमा रहस्यमय भएको एक सुरक्षावीद्को भनाई छ ।
यसैबिच काठमाडौं प्रहरी प्रमुख रविन्द्र धानुकको समेत सहयोगमा सिलवाल भुमिगत भएको चर्चा समेत प्रहरी वृतमा चुलिएको छ । एसएसपी धानुकले सिलवाललाई सुचना पास गरे सिलवाल भुमिगत भए स्रोतले भन्यो । मलेसियामा सिलवालको त्यस्तो कुनै कार्यक्रम छैन् ।
उता, त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको रेकर्डमा पूर्वडीआईजी एवं एमालेका सांसद् नवराज सिलवाल एयरपोर्टबाट बाहिरिएको कुनै रेकर्ड छैन स्रोत थप्छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत एक अधिकृतका अनुसार गएको अक्टोबर ४ र डिसेम्बर ६, २०१७ मा विदेशबाट नेपाल आएको रेकर्ड भए पनि उनी त्यसपछि हवाइमार्ग हुँदै विदेश गएको रेकर्ड भने नभएको बताइएको छ ।
अध्यागमनका अनुसार नवराज मलेसिया गएको भनेकै दिन अर्थात् मंगलबार र बुधबार सात जना सिलवाल थरका मान्छे विदेश गएका थिए जसमा नवराज सिलवाल भने नगएको रेकर्ड देखाउछ । सिलवालको नाममा जारी भएको राहदानी १०६१७०२८ नम्बरको राहदानी पछिल्लोपटक विदेशबाट नेपाल फक्रिएको रेकर्ड भए पनि पुनः विदेश गएको देखिँदैन ।
उनको सो राहदानी २०२७ नोभेम्बर ६ तारिखसम्मको म्याद रहेको छ । उनका निकटस्थहरूले सिलवाल मलेसियाको क्वालालम्पुरमा आयोजित एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीद्वारा आयोजित ‘इस्ट एसियन इनिसियटिभ्स इन द कम्युनिटी डेभलपमेन्ट विथ स्पेसियल फोकस टु वुमन’ विषयक कार्यक्रममा भाग लिन गएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी रवीन्द्र धानुकलाई प्रहरी हेड क्वाटरले सिलवालमाथिको कारबाही अगाडि नबढाए सरुवा गर्ने चेतावनी दिएपछि धानुककै निर्देशनमा सिलवालले अन्य योजना तय गरेको स्रोत बताउँछ ।
प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखलाई तत्काल पक्राउ गर्न आदेश गरे पनि उनले सिलवाल ललितपुरको गोदावरीमा बस्ने हुनाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपरेको भन्दै ललितपुर प्रहरीलाई पत्राचार गरेका थिए ।
यसैबीच, काठमाडौं प्रहरीबाट पत्र प्राप्त गरेसँगै ललितपुर प्रहरी प्रमुख (एसएसपी) गणेश ऐरले आफू कानुनअनुसार नै अगाडि बढ्ने बताए।
सिलवालले बोक्ने गरेको मोबाइल नम्बर समेत अफ गरिएको छ भने डीआईजी हुँदा बालकुमारीस्थित रहेको अपार्टमेन्टमा समेत बस्दै आएका थिए । पक्राउ पत्र जारी भएपछि मोबाइल अफ गरेर उनी कि सोही अपार्टमेन्टमा बसेका छन्, या भारतको बाटो हुँदै मलेसिया गएको अनुमान प्रहरीको रहेको छ । प्रहरीले पक्राउ पत्र बोकी ललितपुरको गोदावरीस्थित उनको घरमा गएको थियो ।
कार्यालयमा दर्ता भएको मुद्दा दर्ता नम्बर २८३/०७४-०७५ मुलुकी ऐन किर्ते कागजको महलअन्तर्गतको सरकार कागजात किर्ते मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा केही कुरा बुझ्नुपर्ने भएको भन्दै सिलवाललाई अविलम्ब कार्यालयमा उपिस्थित गराई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गरिदिन भन्दै पत्र काटिएको थियो ।
सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्ते मुद्दामा काठमाडौं प्रहरी परिसरले गत मंगलबार साँझ पूर्वडीआईजी नवराज सिलवालबारे ललितपुर प्रहरीपरिसरलाई लेखेको हो ।
ललितपुर प्रहरीलाई साँझ ७ बजे मात्र पत्र प्राप्त भएको जनाएको छ । त्यसअघि नै सिलवाललाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको भन्ने समाचार फैलिइसकेको थियो । एसएसपी ऐरले भने, ‘हामीलाई सिलवाल उपस्थित गराउने पत्र प्राप्त भएको हो, केही बुझ्नका लागि उहाँलाई ल्याउनू भन्ने आदेश छ ।’
प्रहरी महानिरीक्षक ‘आईजी’ नियुक्ति विवादमा सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) फाइल किर्ते भएको अदालतले निष्कर्ष निकालेको थियो । सरकारी सक्कल फाइल सिलवालले कसरी पेस गरे ? सर्वोच्चको फाइल र सिलवालको फाइलमा भेद किन देखियो ?
राज्यको सक्कल फाइल ब्यक्तीको हातमा कुन संयन्त्रले पुर्यायो ? यो आफैमा राज्य बिरोधी कार्य हो । जसलाई राज्य बिरोधी अपराधका रुपमा लिइन्छ । सिलवालले किर्ते फाइल खडा गरेको आरोपले संशय उत्पन्न भएको हो ।
सर्वोच्चले यस विषयमा संलग्नहरुको पहिचान गरी कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो । केही साताअघि काठमाडौं प्रहरीपरिसरमा उक्त विषयमा सरकारी दस्तखत तथा छाप किर्तेमा मुद्दा दर्ता भए पनि कसैविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भएको थिएन ।
पुस ५ गते दर्ता भएको मुद्दामा त्यसको १० दिनपछि सिलवाललाई उपस्थित गराउने काठमाडौं परिसरको पहलले झन्झन् अन्योल बढाएको छ ।
कीर्ते छानविन अल्झियो ?
जब सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नयाँ हिसाब निकालेर प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनायो, त्यसबेला नै सर्वोच्च परिसरमा हल्लीखल्ली सुरु भइसकेको थियो । सिलवाल आफैं रिट लिएर पुगेपछि त्यसले तनाव मात्र बढाएन, अंक जोड्न सर्वोच्चले जानेन कि सरकारले जानेन भन्ने प्रश्न उब्जियो ।
सर्वोच्चले जब सक्कल खोज्यो, तब डीआईजी सिलवाल स्वयंममाथि कीर्ते गरेको आशंका बढ्यो । त्यही आधारमा क्याबिनेटले सिलवालमाथि छानविन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो र गृह मन्त्रालयले डीआईजी विजयकुमार भट्टको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको छ । यो समितिले सोधपुछका लागि सिलवाललाई बोलाएको थियो । तर, उनले अटेर गरे ।
बयानका लागि नआएको भन्दै प्रहरीले उनलाई सोमबार विहान अधिवक्ता शम्भु थापासँग कानुनी परामर्श लिइरहेका बेला नियन्त्रणमा लिएर हेटक्वार्टर पुर्‍यायो।
सिलवालले अर्यालको नियुक्ति बदरको माग दाबी गर्दै निवेदन दिने क्रममा अर्कै कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अर्कै कागज पेश गरेको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी थियो । यतिसम्म कि सिलवालले सर्वोच्चमा पेश गरेको कासमु फाइलमा प्रकाश अर्यालको फाइलबाट आफ्नो कपीपेष्ट गरेको आरोप छ ।
आरोपको जवाफमा उनी किन पन्छिए त रु चुरो करो यो हो । जसमाथि अहिले छानविन भइरहेको छ । तर उनी पक्राउ पर्न भने सकिरहेकाछैनन् ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइल कसैले पनि राख्न नपाउने भए पनि सिलवालले आफ्नो मात्र नभई अर्यालको समेत फाइल राखेको र व्यक्तिगत फाइल मिडियालाई बाँडेको आरोप छ । र, कीर्ते गरेको आरोपमा छानविन भोगिरहेका सिलवालले छानबिनमा सघाउनु उत्तम हुन्छ ।
निर्दोष छन् कि दोषी ? भन्ने कुरा अनुसन्धान हुन बाँकी छ । कीर्ते छानविनको कुरा उठेसँगै सिलवाल किन पन्छिएकाछन् अन्योल बढेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् । एमालेमा सिलवालको विकल्पमा वामदेव !